Mayelana NATHI - Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd.
I-Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd isendaweni evundile ye-Yangtze River Delta isikhungo se-geometric., Emuva emfuleni iYangtze, eTaihu. EMpumalanga kuya esikhungweni sezomnotho saseChina-eShanghai amakhilomitha ayi-150, entshonalanga ukusuka enhlokodolobha yasendulo-iNanjing amakhilomitha ayi-150, eningizimu kuya eWuxi Sunan International Airport amakhilomitha angama-50. I-Jinghu ne-yanjiang imigwaqo emikhulu emibili ihlangana endaweni yase-jiangyin, ibhuloho lomgwaqo i-jiangyin Yangtze River lixhumana nenyakatho naseningizimu yomfula i-Yangtze, liyindawo ebalulekile yokuhamba eMfuleni i-Yangtze ezansi nomfula. IWuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd itholakala emaphethelweni asempumalanga epaki lezimboni.
I-Wuxi Cayce May Technology Trading Co., Ltd ibhizinisi elihlanganyelwe eligxile kwi-Science, Industry and Trade. Inabasebenzi abangaphezu kuka-300, okubandakanya abasebenzi abangaphezu kuka-88 basekolishi nabasebenza ezobuchwepheshe. Manje sekuyilungu lamandla elanga eChina. Inkampani yethu isidlulile i-ISO9001: Isitifiketi Sokuphathwa Kwekhwalithi Yekhwalithi ka-2008, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo kwe-ISO14001, isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha kwezokuphepha. Imikhiqizo ifaka phakathi i-petroleum, i-petrifaction, ukudla, ukuthunyelwa, ujantshi nolayini we-electron, njll. Manje sinezindawo zokucubungula ezingaphezulu kwamamitha ayizinkulungwane ezingamashumi amane kanye nemishini engaphezu kwengu-80 yokukhiqiza, ukuthengiswa konyaka kuka-2018 kungamakhulu amabili ezigidi. Inkampani yethu inezentengiso, ukumaketha, umnyango wephrojekthi, umnyango wezobuchwepheshe, i-QC, igumbi lobuciko, umnyango wezokukhiqiza, amalebhu, umnyango wezinsizakalo, njll, okunikeza uhlelo lokuqinisekisa oluqinile lokukhiqiza, ikhwalithi yokuthengisa nangemva kokuthengisa kwemikhiqizo.
Eminyakeni yamuva nje, le nkampani yatshala imali eningi emindenini eqinile, yaklanywa futhi yakhiqizwa ngaphezu kwamabhande wokuhambisa umthwalo ongaphezu kweshumi, indwangu yenjoloba nentambo yokukhiqiza ishidi lenjoloba. Manje sinezinkokhelo ezi-3, umshini wokuxuba ongu-12, i-calender eyodwa eyi-1830, i-calender eyodwa engu-1730, i-calender eyodwa engu-1730, umshini ophilisa uhlobo lwesigubhu ongu-1400, imishini emibili yokwelapha isigubhu engu-1800, umshini wohlobo lwe-drum wohlobo lwe-2000, owodwa ongu-2200 umshini wokuphulukisa imigqomo, umshini ophulukisa uhlobo oluthile lomgqomo ongu-3000, umshini owodwa ophulukisa imigqomo engu-4200, umshini wohlobo lwe-drum ongu-4200 ungowona mkhulu emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, sinamasethi ayisishiyagalombili omshini wokucindezela, okungu-2400 * 10000, 4000 * 2000, 1500 * 3000, 1400 * 5700, 1400 * 4000, 1200 * 2700, 650 * 4000 Ngo-2016, senze umshini omkhulu kakhulu, ububanzi buyimitha engama-24.
ICaycemay igxile ekuletheni izinto ezinzima kanye nezimpahla ezithambile. Abasebenzi abaningi abaqeqeshiwe nabanekhono bayabandakanyeka futhi bafundisiwe ukuqinisekisa ukusebenza kohlelo lwekhwalithi, ukuphathwa kokukhiqizwa kanye nekhono elikhulayo lomkhiqizo. Okwamanje, ukuze kuqoqwe imininingwane emisha yezimakethe kanye nomyalezo wobuchwepheshe oxhasa ukukhula kahle ngemikhiqizo emisha, iCaycemay isungule ubudlelwane bokuhlala unomphela futhi obuzinzile nezikhungo ezithile zophenyo. Okwamanje, inkampani inamalungelo obunikazi ayishumi nambili, uhlaka lwenjoloba olungabumbeki, imicu yomkhiqizi wamazinga wokushisa ongashisi ukushisa, ibamba iqhaza ekubuyekezweni kwamazinga kazwelonke waphansi lwenjoloba.
Ikhwalithi yimpilo yenkampani, inkampani ikunaka kakhulu ukulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo, sinabasebenzi abaqeqeshiwe abagxila ekuphathweni kwekhwalithi, sinelebhu yemikhiqizo yobungcweti, igumbi lokuhlola, amalebhu. Ekukhiqizweni, sinamathela ekukhiqizeni okujwayelekile, ukuphoqelelwa okuqinile kwamazinga kazwelonke, amazinga wezimboni namazinga ebhizinisi, ukuze imikhiqizo ikwazi ukwanelisa izidingo zamakhasimende.
Imikhiqizo yenkampani yakwaCaycemay ihlobene nokukhiqizwa kukazwelonke ezimbonini ezahlukahlukene ezweni lonke, eminye imikhiqizo ithunyelwa emazweni amaningi. Isikali sayo sokukhiqiza, ikhwalithi, intengo, ukulethwa kanye namakhasimende insizakalo ibe neyakho ukunconywa kwamakhasimende futhi yajabulela idumela eliphakeme.
Imikhiqizo yaseCaycemay ibhekise ebangeni eliphakeme, ukugaya futhi imunce ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bakwamanye amazwe, kungumsebenzi ukufaka esikhundleni ukungenisa ngaphakathi ezweni, ukwandisa izinga lasekhaya. Indwangu ebuyisela umlilo emotweni yesitimela inikezwa izinkampani zangaphandle; ishidi le-raber labicah laminator yelanga, ingilazi, ukusebenza ngokhuni nokwenza amakhadi kujabulela idumela elihle; iraba phansi kukhula kahle kakhulu.
Ngomqondo wokuthi ikhwalithi ephezulu, insiza ehamba phambili, intengo yokuncintisana izinzile futhi ikhulise inkampani, uCaycemay uyaqhubeka nokwakha isiko nokucabanga "okususelwa kumuntu." Lesi senzo sikhuthaza kakhulu abasebenzi ukuthi bathuthukise umthwalo wemfanelo nekhono lokulungisa okuthuthukisa amandla nobumbano lwebhizinisi.
Ngomqondo othi "oqotho nokwethembela uheha amakhasimende emhlabeni wonke", uCaycemay ngentshiseko uyakwamukela ukuthi uvakashele ifektri ngethemba lokuthola ukwethenjwa kwakho, ukwesekwa nokunconywa ngenxa yemikhiqizo emihle kakhulu kanye nensizakalo yeCaycemay.
ICaycemay isungule isethi yohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi kusuka ezintweni ezingavuthiwe ezingena efektri kuya kumkhiqizo emva kokuthengisa kanye nenhlangano entsha yokuthuthukisa umkhiqizo enezisebenzi zobunjiniyela nezobuchwepheshe njengomzimba omkhulu. Ngesisekelo sokuzinzisa ukukhiqizwa kwemikhiqizo ekhona nokuqhubeka nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo. Khuphula umfutho wenguquko kwezobuchwepheshe kanye nobuchwepheshe obusha, futhi ngokubambisana namayunithi ocwaningo lwesayensi yasekhaya namayunivesithi. Qasha ongoti abavela phesheya. Sombulula izinkinga zobuchwepheshe kwinqubo yokukhiqiza futhi uthuthukise imikhiqizo emisha. Inkampani yaseCaycemay izimisele ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezinokwethenjelwa nezinhlelekile, iphendule futhi isuse amaphutha wokuhambisa ibhande (elihambayo) futhi ikhethe imikhiqizo yebhande yokudlulisa efanelekayo ukuhlangabezana nezincazelo zokusebenza komsebenzisi nezidingo zohlelo lokusebenza. Imishini yokucubungula engezansi eyenzelwe futhi yathuthukiswa yinkampani ingaqinisekisa ukubopha okusheshayo nokusheshayo kwebhande nokuhlanganiswa kwebhande kusayithi ngumsebenzisi. Nciphisa isikhathi sokuphumula. ukunciphisa izindleko zokukhiqiza. Umsebenzisi angacacisa usayizi nokucaciswa kwebhande, ibhande elingapheli noma ibhande elivulekile, noma imichilo yokuphakamisa i-glue, imichilo yokuqondisa noma iziketi ebhande. Sijwayelane nesidingo sakho samabhande, futhi sikholwa ukuthi insiza yethu izokusiza.